अदालतको आदेश पालना गर्नकै लागि नियमित मन्त्रालय गइरहेकी हुँ : डा. पुष्पा चौधरी – Health Post Nepal
२०७५ कार्तिक २७ गते ९:५९
सचिव डा. पुष्पा चौधरीले आफूले अदालतको आदेश पालना गर्नकै लागि नियमित मन्त्रालय गइरहेको बताएकी छिन् । हेल्थपोस्टसँग कुरा गर्दै चौधरीले अदालतको आदेशपछि आफू नियमित मन्त्रालय गइरहेको स्विकारिन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई अधिकारसहितको जिम्मेवारी दिइएपछि पनि उनी मन्त्रालय जान छाडेकी छैनन् ।
मन्त्रीपरिषद्ले २८ असोजमा डा. चौधरीको सरुवा गरेको थियो । त्यसपछि उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट रमाना लिनसमेत गइनन् । उनी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा हाजिरी नभई सरुवाविरुद्ध अदालत गएकी थिइन् । अदालतको आदेशपछि भने उनी नियमित मन्त्रालय गइरहेकी हुन् ।सरकारले अदालतको आदेशबारे जानकारी नै नआएको भन्दै उनलाई जिम्मेवारीमा फर्काएको छैन । चौधरीले भने आफूलाई अन्याय भएर अदालत गएको र न्याय पाएको दाबी गर्दै आएकी छिन् । चौधरीले स्वास्थ्यमा अधिकारसहितको निमित्तको अधिकार डा. प्याकुरेललाई दिने गरी भएको नयाँ निर्णयबारे भने वकिलसँग परामर्श गर्ने बताइन् ।
‘मलाई दिएको आधिकारिक पत्रमा केही भनिएको छैन, व्यक्तिपिच्छे अनुमानको भरमा गलत टिप्पणीहरू गरिएका छन्,’ उनले भनिन् ।
आफूले स्वास्थ्यसचिवका रूपमा काम गरिरहेको समयमा सरुवा गर्ने निर्णय आकस्मिक तरिकाले आएको र सो निर्णय कानुनविपरीत भएको उनले बताइन् । ‘मलाई अन्याय भएको महसुस भयो, त्यसैले अदालत गएकी हुँ,’ उनले भनिन् । चौधरीले आफ्नो स्वास्थ्यसचिवको नियुक्ति स्वास्थ्य ऐनअन्तर्गत वैधानिक भएको समेत बताइन् । ‘म अदालतको आदेशको पालना गर्नकै लागि नियमित मन्त्रालय गइरहेकी छु,’ उनले भनिन् । सरकारले किन सरुवा गरेजस्तो लाग्छ भन्ने प्रश्नमा उनले यो प्रश्न निर्णयकर्तासँग सोध्न सुझाइन् । ‘मलाई दिएको आधिकारिक पत्रमा केही भनिएको छैन, व्यक्तिपिच्छे अनुमानको भरमा गलत टिप्पणीहरू गरिएका छन्,’ उनले भनिन् ।
पदमा रहँदा गरेको कामका विषयमा उब्जिएको विवादबारेको प्रश्नमा उनले सरुवाको विषय नै अहिले अदालतमा गइसकेको अवस्थामा सार्वजनिक रूपमा थप टिप्पणी गर्न नचाहेको बताइन् । ‘मिडियाले आ–आफ्नै तर्कका आधारमा मेरा विरुद्ध लेखेका छन्, जुन कोही पनि आधिकारिक व्यक्तिलाई सोधेर पुष्टि गरेका छैनन्,’ उनले भनिन् ।